RW Xasan Kheyre oo Qadar safar ku tagey - WardheerNews
RW Xasan Kheyre oo Qadar safar ku tagey
Muqdisho (WDN)-Wafdi uu hogaaminayo Ra’isalwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa socdaal ugu dhoofay dalka Qadar. Wafdiga kheyre waxa ka mid ahaa Guddoomiyaha Bangiga Dhexe Cabdiraxmaan Maxamed.
RW Kheyre (dhexda) iyo ilaaladiisa
Wararka soo gaadhaya WardheerNews, ayaa sheegaya safarka degdega ah ee Kheyre, wakhtigan oo dhamaan safarada adduunka ay xidhanyihiin cudurka Covid-19 daraadiis, ayaa la sheegayaa in uu la la xidhiidho mucaawanooyinka dhaqaale ee ay Qadar u fidin jirtay Soomaaliya oo is taagay.
Qadar ayaa la leh xidhiidh dhow DFS, iyada oo dhaqaale siyaasaddeed oo joogto ah (political money), oo aan la soo marin khasnada Bangiga Dhexe ku taaageerta xukuumadda Farmaajo.
Taageeradaasi dhaqaale ayaa hakat gashey kadib marki culeys ay Dowladda Maraykanku saartay Qadar.
RW Kheyre ayaa la sheegayaa in uu u tagay Qadar si wadahaddal uu ula yeesho madaxda Qadar.
Qadar ayaa si aad ah faraha ugula jirta arimaha Soomaaliya, taasi oo qeyb ka ah qalalaaseha siyaasaddeed ee ka taagan Soomaaliya.